3 Sirood Oo Lamaanaha Ka Saacidaya Inay Yeeshaan Xiriir Xoogan - Aayaha
Haddii aad rabtid xiriir kalgacayl leh oo waara oo aad la yeelato seeygaaga/xaaskaaga, adiga iyo lamaantaada waxaad u baahantihiin inaad la qabsataan caadooyinka hoos ku xusan.
Midba kan kale yuusan yasin
Sida aad ula dhaqanto lamaankaaga/lamaantaada marka aad la joogtaan dad kale ayaa micno weyn sameyneysa haddii aad rabtid inaaad dhisto xiriir xoogan oo idiin dhexeeya adiga iyo seygaaga. Waligaa ha liidin ama hoos ha u dhigin ama haku oran wax xun markaad banaanka joogtaan ama xittaa aad guriga ku sugantihiin.
Iskula hadla si wanaagsan oo naxariis leh markaad bulsho la joogtaan, wixii isfaham waa ahna kawada hadla markaa tihiin labadiina kaliya.
Haka daalinina inaad isdhahdaan “Waanku jeclahay”
Ereyadaan yare e fudud (Waanku Jeclahay) waa muhiim haddii aad rabtid inaad dhisto xiriir xoogan oo aad la yeelato xaaskaaga. Had iyo jeer maalintii u sheeg jacaylka aad u qabto inta uu la egyahay. Maalinta kusoo gaba gabeey ereyada waanku jeclahay.
Waa inaad garataa qiimaha uu leeyahay tanaasulka haddii aad rabtid inaad xiriir awood leh. Mar waliba ma rabi kartid inaad sameyso waxa uu xaaskaaga ama seygaaga rabo balse waa u muhiim xaaskaaga inaad waxa u sameyso adigoo dhoolla cadeynaya maahan adigoo careysan ama dhibsanaya.
3 Siyaabood oo qeylada iyo hadal-xumada looga dhaafo seygaaga si jacaylku u koro
Haddii Ninkaagu Sameeyo 7-daan Waxyaabood, Ha Iska Sii Deyn – Gabdhaha Waa Inay Aqriyaan